Revenu စျေး - အွန်လိုင်း REV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Revenu (REV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Revenu (REV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Revenu ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
REV – Revenu
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Revenu တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Revenu များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RevenuREV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0106RevenuREV သို့ ယူရိုEUR€0.00896RevenuREV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00809RevenuREV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00966RevenuREV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0962RevenuREV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0668RevenuREV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.234RevenuREV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0394RevenuREV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0141RevenuREV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0148RevenuREV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.241RevenuREV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0819RevenuREV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.056RevenuREV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.793RevenuREV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.76RevenuREV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0145RevenuREV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.016RevenuREV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.328RevenuREV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0737RevenuREV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.12RevenuREV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩12.62RevenuREV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.01RevenuREV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.777RevenuREV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.293
RevenuREV သို့ BitcoinBTC0.0000009 RevenuREV သို့ EthereumETH0.00003 RevenuREV သို့ LitecoinLTC0.000184 RevenuREV သို့ DigitalCashDASH0.000123 RevenuREV သို့ MoneroXMR0.000122 RevenuREV သို့ NxtNXT0.878 RevenuREV သို့ Ethereum ClassicETC0.00148 RevenuREV သို့ DogecoinDOGE3.03 RevenuREV သို့ ZCashZEC0.000128 RevenuREV သို့ BitsharesBTS0.407 RevenuREV သို့ DigiByteDGB0.404 RevenuREV သို့ RippleXRP0.0355 RevenuREV သို့ BitcoinDarkBTCD0.000374 RevenuREV သို့ PeerCoinPPC0.038 RevenuREV သို့ CraigsCoinCRAIG4.95 RevenuREV သို့ BitstakeXBS0.463 RevenuREV သို့ PayCoinXPY0.189 RevenuREV သို့ ProsperCoinPRC1.36 RevenuREV သို့ YbCoinYBC0.000006 RevenuREV သို့ DarkKushDANK3.48 RevenuREV သို့ GiveCoinGIVE23.5 RevenuREV သို့ KoboCoinKOBO2.47 RevenuREV သို့ DarkTokenDT0.00973 RevenuREV သို့ CETUS CoinCETI31.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 19:55:01 +0000.